သတိုး: မှတ်မှတ်ရရ မှတ်တမ်း
Posted by သတိုး at 1:59 AM
ရွှေအိမ်စည်မေ September 1, 2013 at 1:45 PM
blog Day မှာ အမှတ်တရအနေနဲ့ ပါဝင်ရေးသားပေးတာ ကျေးဇူးပါ အကိုသတိုး
ဟန်ကြည် September 1, 2013 at 3:29 PM
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် ဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ ၀ထ္ထုတိုတွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ပေမယ့် ကိုသတိုးရဲ့ ၀ထ္ထုတိုလေးတွေကိုတော့ စ်ိတ်လိုလက်ရ ဖတ်ဖြစ်သဗျ...အရွယ်က စကားပြောချင်လာလို့ အညုတွေ အခရာတွေ ငြီးငွေ့လာတဲ့ အချိန်မှာ သရုပ်မှန်ဝတ္ထုတိုလေးတွေနဲ့ သွားတွေ့တာကိုး...နောက်ထပ်လည်း စာကောင်းပေမွန်တွေ ဖန်တီးသွန်းလုပ်နိုင်ပါစေဗျာ...
သူကြီးမင်း (တုံးဖလား) September 1, 2013 at 3:35 PM
အရေးကြဲပေမဲ့ တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ် ရသပေးလေ့ရှိတဲ့ သတိုးတစ်ယောက် ဘလော့ပင်လယ်ပေါ်မှာ ပျော်ပျော်ကြီးဆက်လက် လှော်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဘလော့တွေဖတ်ဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနှစ်အတွင်း ကွန်မင့်တွေ ချန်ခဲ့ဖို့ အားနည်းနေခဲ့မိတယ်။
ဘလော့တွေကိုတော့ ဖတ်နေခဲ့ ဖတ်နေဆဲ ဖတ်နေဦးမှာပါ။ (သူကြီးမင်း)
kay September 1, 2013 at 4:43 PM
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ရေးခဲ့ကြပါသည်... ပေါ့။း)
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! September 1, 2013 at 11:13 PM
ရသကောင်း စာပေတွေနဲ့ လက်ရာမွန်များစွာကိုလည်း မျှော်လင့်စောင့်စားပရစေအကိုရေ... Happy Blog Day ပါလို့....:)
ငြိမ်းစိုးဦး September 2, 2013 at 11:24 AM
အချစ်တို့ကိုဆက် မေတ္တာကွန်ရက်ကိုချဲ့လို့ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ထွန်းပေါက်လာ အားရ၀မ်းသာကြိုဆိုတာ လူ့ရွာလောကမှာ ...
မြသွေးနီ September 4, 2013 at 11:27 AM
ကိုသတိုးရဲ့ ရသ၀တ္တုတိုတွေ အမြဲအားပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ စာမျက်နှာပေါ်အထိ နေရာတစ်နေရာ ရလာတာလဲ မုဒိတာပွား ၀မ်းသာမိရတယ်။ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ပစေ ဘလော့ကိုတော့ ကျွန်မတို့ ချစ်ခင်နေဆဲပါ။ ဘလော့ကြောင့်သာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ရင်းနှီးမှုတွေ ရင့်သန်လာရတာမဟုတ်လားနော်..
သိ င်ျဂါ ရ September 6, 2013 at 11:07 AM
Blog Day ကနေ ... စာတွေ ပြန်ရေးဖတ်လာတဲ့ blogger အပေါင်း နဲ့ ထပ်တူ ၀မ်းမြောက်မိပါကြောင်း ... ၊ Print Enviroment ဆီ ကူးပြောင်းနိူင်ခဲ့တဲ့ ... ဆရာသမား အပေါင်းအတွက်လည်း ... ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်း ...
ဘယ်တုန်းက တင်ထားမှန်းမသိလိုက်ဘူး ကိုသတိုးရေ ... အခုမှ ဖတ်မိတယ် ... ရသ စာပေလေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်